သင်က ဘယ်လိုအမေအမျိုးအစားလဲ? - Chit MayMay
Home Mom and Baby သင်က ဘယ်လိုအမေအမျိုးအစားလဲ?
ကိုယ့်ကိုယ်ကို” ငါကဘယ်လိုအမေမျိုးလဲ? ဆိုတဲ့မေးခွန်းကို သံသယကင်းကင်းနဲ့ မေးဖူးပါသလား? ဒါက သင့်ကလေးတွေအတွက် မေးခွန်းတစ်ခု ဖြစ်ပေမယ့် သူတို့က ဖြေဖို့ အရမ်းငယ်လွန်းနိုင်ပါတယ်။ သူတို့ထဲက အချို့က စကားမပြောနိုင်သေးပါဘူး။ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု အရမ်းနည်းပါတယ်။ မိခင်အသစ်တွေအနေနဲ့ သင်ယူနေဆဲဖြစ်ပြီး မိမိကိုယ်ကို ဆန်းစစ်ဖို့ အတော်လေးခက်ခဲပါတယ်။
အမေဆိုတာ ကျွန်တော်တို့အားလုံးနဲ့ ပထမဆုံးထိတွေ့ဖူးတဲ့သူ ဖြစ်ပါတယ်၊ ပထမက အမိဝမ်းထဲမှာ၊ ပြီးတော့ သူ့ရင်ခွင်ထဲမှာပါ။ သူမက ကျွန်တော်တို့ ချစ်ရတဲ့ ပထမဆုံးလူပါပဲ ၊ဒါ့ကြောင့် သူက ကျွန်တော်တို့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးမှုရဲ့ အဓိကကိုယ်စားလှယ် ဖြစ်ပါတယ်။
မိခင်အမျိုးအစားနဲ့ ခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ခြင်းက ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ကလေးတွေနဲ့ ကျွန််တော်တို့ကို ဆက်စပ် ကူညီနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် “ငါတို့ဖြစ်နေတဲ့ အမေအမျိုးအစားက ငါတို့တကယ်ဖြစ်ချင်တာလား”၊ “ငါတို့တိုးတတ်ဖို့ လိုအပ်သလား”ဆိုတာကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနိုင်ပါတယ်။
မိခင်အများစုကို ခွဲခြားသတ်မှတ်ပေးတဲ့ categories ငါးမျိုးရှိတယ်လို့ မိသားစုဆက်ဆံရေးမှာ ကျွမ်းကျင်သော စိတ်ပညာရှင် Stephen Poulter က သူ့စာအုပ် The Legacy of Mothers မှာ ထောက်ပြထားပါတယ်။
” ငါတို့အမေတွေက ငါတို့ရဲ့ပထမဆုံးအချစ်အတွေ့အကြုံ ဖြစ်နိုင်တယ်၊ ဒါပေမယ့် သူတို့ရဲ့အပြုအမှုပေါ်မူတည်ပြီး သူတို့က ငါတို့ကို ပိုငတ်မွတ်လာစေတယ်၊ စိုးရိမ်တယ်၊ ဒေါသထွက်တယ်၊ စိတ်ဓါတ်ကျစေတယ်၊ ဒါတွေက အလုပ်မှာရော လူမှုဆက်ဆံရေးမှာပါ အောင်မြင်မှုတွေကို ထိခိုက်စေတဲ့ အရည်အသွေးတွေပဲ” -Stephen Poulter-
ဒီအမေမျိုးက သူ့ကလေးတွေကို သူတို့လုပ်သမျှအရာအားလုံး အောင်မြင်အောင် ကြိုးစားခြင်းအတွက် အမြဲစိုးရိမ်ပူပန်နေတဲ့ အခြေအနေမှာ ရှိပါတယ်။ ဒီအမေတွေက အချိန်တိုင်း ပြီးပြည့်စုံတဲ့ မိသားစုကို ပိုင်ဆိုင်လိုကြပါတယ်။ ဒီမိခင်မျိုးဖြစ်ခြင်းရဲ့အကျိုးဆက်အနေနဲ့ ကလေးတွေဟာ ကျရှုံးမှာကို ကြောက်ရွံတယ်၊ စိတ်ပျက်စရာကောင်းတာကို သည်းခံနိုင်ကြတယ်လို့ ထောက်ပြထားပါတယ်၊ ဒါ့ပြင် သူတို့ဟာ အောင်မြင်ခြင်းနှင့်ပတ်သတ်လို့ သူတို့အမေရဲ့စိုးရိမ်စိတ်တွေ ကူးစက်လာစေနိုင်ပါတယ်။ ဒါက သူတို့ရဲ့ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးကို ထိခိုက်စေပြီး သူတို့အတွက် ဘယ်သူမှ အလုံအလောက်မကောင်းကြဘူးလို့ ထင်ကောင်းထင်နိုင်ပါတယ်။ ထို့အတူ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကျစွာ ဒီမိခင်အမျိုးအစားနဲ့ ကြီးပြင်းလာတဲ့ ကလေးတွေဟာ အလုပ်မှာ ပိုပြီးအကျိုးဖြစ်ထွန်းလေ့ရှိပါတယ်။
Poulter ရဲ့အဆိုအရ ဒီအမေမျိုးက အတွေ့ရ အများဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ယခင်ပုံစံတွေနဲ့ မတူပဲ ဒီမိခင်တွေက ခေါင်းဆောာင်မှုကို ကန့်သန့်ဖို့ (သို့) အကန့်အသတ်ချမှတ်ဖို့ မကြိုးစားကြပါဘူး။ အမှန်တော့ ဒီလိုအမေမျိုးက သမီးတွေရဲ့အဝတ်အစားကိုဝတ်ပြီးတော့တောင် သမီးတွေနဲ့အတူ ပါတီပွဲလုပ်လေ့ရှိပါတယ်။
“ဒါက စံနှုန်းတွေ မသတ်မှတ်ဖို့ ခေတ်သစ်အမေတွေရဲ့ ပုံမှန်သဘောထားတစ်ခုဆိုပေမယ့် ကလေးတွေဟာ အခြားသူငယ်ချင်းတစ်ယောက်မဟုတ်ဘဲ အမေကို လိုအပ်ပါတယ်”
ဒီလိုအမေဖြစ်ခြင်းရဲ့ ပြဿနာတစ်ခုက ကလေးတွေဟာ ငြင်းပယ်ခံရခြင်း၊ စွန့်ပစ်ခံရခြင်း (သို့) မိခင်မဲ့ခြင်းကိုတောင် ခံစားရနိုင်ပါတယ်။
အများအားဖြင့် သူတို့က ကြောက်ရွံ့ခြင်း၊ စိုးရိမ်ခြင်းနှင့် ထိန်းချုပ်ခြင်းခံရပါတယ်။ သူတို့ကလေးတွေကို စိတ်ကျရောဂါ (သို့) စိုးရိမ်စိတ် ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တဲ့ စိတ်ခံစားမှု အတက်အကျတွေ သူတို့ဆီမှာ ရှိပါတယ်။ တစ်ခါတစ်ရံမှာ သူတို့က ကလေးတွေကို ဝေဖန်နိုင်တယ်၊ အရမ်းတောင်းဆိုနိုင်ပါတယ်၊ ၎င်းက self-esteem ဖွံ့ဖြိုးမှု နိမ့်ကျလာစေနိုင်ပါတယ်။
ဒါ့ကြောင့် ဒီမိခင်မျိုးကနေလာတဲ့ ကလေးတွေဟာ အခြားသူတွေကို ယုံကြည်ဖို့ အခက်အခဲတွေ ရှိနိုင်ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးမှာ ရင်းနှီးမှုကို ကြောက်ရွံပြီး သေးငယ်သော အခြေအနေတွေမှာ စိတ်ခံစားမှုပိုင်းဆိုင်ရာ အလွန်အကျွံ တုံ့ပြန်မှုတွေ ခံရလေ့ရှိပါတယ်။
၄။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဦးစားပေးတဲ့အမေ
ဒီအမျိုးအစားက သူတို့ကလေးတွေကို ဒုတိယ (သို့) တတိယနေရာမှာ ထားတဲ့ အမေတွေကို ရည်ညွှန်းပါတယ်။
” ဒီအမေက သူ့ကလေးတွေရဲ့ ကျန်းမာချမ်းသာမှုကို ရင်းရရင်တောင်မှ အဓိက အာရုံစိုက်ခံချင်ကြတယ်”-Stephen Poulter-
အများအားဖြင့် သူတို့က ကလေးတွေကို စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အထောက်အပံ့အများကြီး မပေးကြပါဘူး၊ ဒါ့ကြောင့် ကလေးတွေဟာ အခြားသူတွေအပေါ် စာနာမှု မတည်ဆောက်နိုင်ပါဘူး။ ဒါ့အပြင် သူတို့ဟာ အခြားကလေးတွေထက် သာလွန်တဲ့ ခံစားချက်မျိုးနဲ့ ကြီးပြင်းလာလေ့ရှိပြီး ဝေဖန်မှုတွေကို လက်ခံနိုင်စွမ်းမရှိပါဘူး။ ပြဿနာတွေကို မဖြေရှင်းနိုင်ပါဘူး။ အခြားတစ်ဖက်မှာ သူတို့ဟာ တစ်ခုခုလုပ်ဖို့ တစ်စုံတစ်ယောက်ရဲ့ ထောက်ခံချက်လိုအပ်သော ဆန့်ကျင်ဘက် တုံပြန်မှုကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။
၅။ ပြီးပြည့်စုံသော အမေ
ဒီမိခင်အမျိုးအစားက အမျိုးအစားအားလုံးအကြား ဟန်ချက်ညီညီ အောင်မြင်အောင် စီမံနိုင်သူ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုလိုတာက အာရုံစိုက်မှု၊ အလွန်အမင်းကာကွယ်မှု၊ ဝေဖန်မှုနှင့် စိတ်ခံစားမှုဆိုင်ရာ ပံ့ပိုးမှုအကြားမှာ မျှခြေတစ်ခု ရှိပါတယ်။ ဒီအရာက အားလုံးကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်တဲ့ စံပြအမေဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
” နားလည်တဲ့ မိခင်တွေက သူတို့ကလေးတွေကို လုပ်သင့်တာတွေ လုပ်ဖို့နှင့် သူတို့ ဘာဖြစ်သင့်တယ်ကို ဘယ်လိုလမ်းညွှန်ရမယ်ဆိုတာ သိပါတယ်”
ဒါဆို သင်က ဘယ်လိုအမေအမျိုးအစားလဲ? သင့်ကိုယ်သင် ဆန်းစစ်ပါ။ သင်အမှားလုပ်မိနေတယ်လို့ ထင်တဲ့အရာတွေကို ရှာဖွေပါ။ အရာအားလုံးက တိုးတတ်ပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်၊ ဒါ့ကြောင့် သင်မကြိုက်တာ တစ်ခုခုရှိရင် အဲဒါကို ပြောင်းလဲပစ်ပါ။
Previous articleမိခင်နှင့်သမီးတွေကြားက ပြောဆိုဆက်ဆံရေး(communication)အတွက် သိကောင်းစရာများ
Next articleကျေးဇူးတင်တတ်သော ကလေးတစ်ယောက်ဖြစ်အောင် ပျိုးထောင်နိုင်မည့် နည်းဗျူဟာ (၆) ချက်